Diyaaraddii ugu horeysay oo ardey Afrikaan sameeyeen oo Masar ku wajahan | Saxil News Network
Image captionMegan (Middig) iyo Agnes (Biddix) oo duulinaya diyaaradda
Diyaarad ay hagaajiyeen da’yar u dhashay dalka Koonfur Afrika ayaa lagu guuleystay inay ka ambabaxdo magaalada Cape Town , waxaa ay ku wajahantahay magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Diyaaraddan ayaa markii ugu horreysay kusii hakatay dalka Namibia.
Duulimaadkeeda ilaa Qaahira ayaa waxaa uu qaadan doonaa muddo lix toddobaad ah, waxayna jari doontaa masaafo dhan 12,000 Kiiloo miitar.
Diyaaraddan oo loogu magac daray ‘Sling 4’ ayaa waxaa dalka Koonfur Afrika ku sameeyay 20 ardey ah oo dhiganayay kulyado kala duwan.
“Ujeedka hirgelinta tallaabadan waxay tahay in aan Afrika tusno inay sameyn karto wax kasta waa haddii aad ka fekertid” ayuu yiri Meghan oo wiil 17 jir ah oo duuliye ka ah diyaaradda.
Image captionArdeyda xilli ay hagaajinayeen diyaaradda Sling 4
Da’yarta ayaa diyaaradda ka hagaajiyay qalab ay soo saartay warshad ku taalla Koonfur Afrika, waxay ku qaadatay muddo saddex toddobaad ah, qalabka ayaa ah mid lasoo uruuriyay oo la’isku geeyay si diyaarad looga soo saaro.
“Waxaan eegay diyaaradda, waan ku faraxsanahay tallaabadaas, ma rumeysan karo howshan inoo suurogashay, waxaa ay ii lamid tahay sida canugeyga oo aan soo koriyay” ayay tiri Agnes Keamogetswe Seemela oo ah gabadh 15 jir ah oo kasoo jeeda gobolka Gauteng ee Koonfur Afrika.
“Diyaaradda si wacan ayay u duuleysaa, muuqaalka hawada waa mid soo jiidasho leh” ayay tiri xilli diyaaradda ay mareysay hawada magaalada Johannesburg ka hor intii aysan bilaabin duulimaadka.
Image captionMegan Werner oo 17 jir ah kana mid ah da’yarta sameysay diyaaradda
“Waxaan kamid ahaa dadkii isku xiray qeybo kamid ah qalabka ay ka sameysan tahay diyaardda gaar ahaan garbaha ay ku duusho” ayay tiri.
Gabadhan 15 jirka ah, waxay ku rajo weyntahay in dadaalkeeda ku aadan howshan uu diirrogelin dad badan “Markii ugu horreysay, bulshada aan kasoo jeedo waxay isku naxeen, ma aysan rumeysan in aan diyaarad sameyn karo, waxaa ku yiri, waxaan sameeyay diyaarad uu duuli doonto mid Cape town ilaa Qaaahira”
“Hadda waxay ku faraxsan yihiin horumarkeyga”
Qofkii bilaabay mashruuca lagu dhisayay diyaaradda waxaa uu ahaa Meghan oo 17 jir ah kaas oo sameeyay mashruuca loogu magac daray U-Dream Global initiative.
Wiil Soomaali ah oo jago wayn ka helay ururka OIC
Halkee ayuu ku dambeeyay ururka Al-Qaacidda?
Agnes Keamogetswe Seemela waxay kamid aheyd lix ardey ah oo helay ruqsooyinka duulista diyaaradaha, waxay ardeydan wadaagi doonaan howsha duulista diyaaraddooda.
“Helidda ruqsooyinka duulista diyaaradda waxay lamid tahay adiga oo qaatay shahaadada koowaad ee Jaamacadda, aniga oo imtixaamka Iskuulka u diyaar garoobaya haddana ku mashquulsan howsha diyaaradda waa arrin adag” ayay tiri Meghan.
Kooxda diyaaradda wadda waxay markii ugu horreysay ku hakanayeen magaalo xeebeedka Luderitz ee dalka Namibia, diyaaradda waxay duulimaadkiiba ku safreysaa lix saacadood iyo bar, inta aysan gaarin Masar waxay kusii hakan doontaa dalalka Zimbabwe, Malawi, Tanzania, Kenya, Itoobiya iyo Eritrea.
Diyaaraddan loogu magac daray Sling 4 oo ay hagaajiyeen ardeyda, waxay qorshaheedu tahay inay sii marto magaalooyin dhowr ah inta ay ku gudo jirto safarka si ay ula hadlaan da’ yar badan si ay ugu dhiirogeliyaan inay sameyn karaan horumarkan